सत्तासीन नेकपा र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको रहस्यमयी भाइचारा
40881910 1126408 9266681 30488821
सत्तासीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका बीच भाइचारा सम्बन्ध स्थापित भएको छ । यी दुई पार्टीबीच भएको ६ बुँदे समझदारी अहिले राजनीतिक वृत्तमा विशेष चर्चाको विषय बनेको छ ।चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल आगमन हुने पूर्वसन्ध्यामा भएको यो भाइचारा सम्बन्धले मुलुकभित्रको मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतको पनि ध्यान केन्द्रित भएको छ ।यो भाइचारा सम्बन्धको समझदारीले प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्र छलफलको विषय बनाइदिएको छ । आफ्नो मुख्य प्रतिस्पर्धी नेकपासँगको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको सहकार्यले आफ्नो राजनीतिमा प्रतिकूल असर पार्ने त होइन ? भन्ने चिन्ता नेपाली कांग्रेसमा प्रकट हुन थालेको छ । हल्ला नै सही, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङ्ग विचारधारालाई नेकपाले अबलम्बन गर्न लागेर हो भन्ने आँकलन केही नेपाली बुद्धिजीवी र राजनीतिक विश्लेषकले गर्न थालेका छन् ।सत्तासीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीबीचको यो भाइचारा सम्बन्धले विशेषतः अमेरिकाको निदहराम भएका परिदृश्यहरू सतहमा देखिन थालेका छन् । यो समझदारी भएको लगत्तै अमेरिकी राजदूत याण्डी बेरीले राजनीतिक भेटघाटलाई तीव्रता दिएका छन् । राजदूतले यस विषयमा नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालदेखि प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवालाई भेटिसकेका छन् ।
संसारभरिका कम्युनिष्ट पार्टीहरू बीच एकअर्कामा भाइचारा सम्बन्ध राख्ने परम्परा नयाँ होइन ।
नेपालका अन्य कम्युनिष्ट पार्टीका भाइचारा सम्बन्ध अन्य देशका कम्युनिष्ट पार्टीहरूसँग पनि रहँदै आएको छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीहरूको छिमेकी मुलुक भारतको कम्युनिष्ट पार्टीहरूसँग पनि भाइचाराको सम्बन्ध रहेको सर्वविदितै छ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँग पनि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीहरूको अनौपचारिक सम्बन्ध रहँदै आएको थियो । अहिले त्यस्तो सम्बन्धलाई नेकपा र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले औपचारिकता दिएका मात्र हुन् । यस अर्थमा यो सम्बन्धका विषयमा अनौठो मान्नु पर्ने र शंका उपशंका गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको संयुक्त आयोजनामा भएको चीनका राष्ट्रपतिको ‘सी जिन पिङ्ग विचारधारा’ छलफल अहिले विशेष चर्चाको विषय बनेको छ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले ‘सी जिन पिङ्ग विचारधारा’लाई नेपालमा लागू गर्न खोजेको र त्यसलाई अनुसरण मात्र होइन, कार्यान्वयन गर्न सत्तासीन नेकपा तयार रहेको एकथरी व्यक्तिहरूको मत छ ।चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो देशको परिस्थिति र राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसारको नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रम बनाउनुपर्ने कुरामा निरन्तर जोड दिँदै आएका छन् । अर्को देशको अन्धानुकरण गरेर सफल हुन नसकिने उनीहरूको अटल मान्यता रहँदै आएको छ । सी विचारधारालाई उनीहरू चिनियाँ विशेषता सहितको विचारधारा मान्दछन् । सी विचारधाराका विषयमा विश्वसमुदायलाई जानकारी दिन चिनियाँहरू चाहन्छन् । तर, यो विचारधारालाई अन्य देशमा लाद्न चाहँदैनन् । त्यसैले चिनियाँहरूले सी विचारधारालाई नेकपामार्फत् नेपालमा प्रयोग गर्न खोजेको तर्क र शंका कुनै कोणबाट पनि यथार्थपरक देखिँदैन ।नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीहरूले निरन्तर रूपमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँग भाइचारको सम्बन्ध गाँस्ने कोसिस गर्दै आएका छन् । औपचारिक सम्बन्धसम्म राख्ने अनौपचारिक सम्बन्ध नराख्ने नीतिलाई चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले अवलम्बन गर्दै आएको थियो । कुनै पनि देशको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्ने चिनियाँ विदेश नीतिका कारण उनीहरू औपचारिक सम्बन्ध राख्न पनि त्यति इच्छुक नहुने गरेको पाइन्छ ।पञ्चायती कालमा मात्र होइन, २०४६ सालको परिवर्तनदेखि अहिलेसम्म सरकारस्तरीय सम्बन्ध राख्ने तर पार्टीहरूसँग औपचारिक सम्बन्ध नराख्ने विदेश नीतिलाई उनीहरूले निरन्तरता दिँदै आएका थिए । चिनियाँहरूले सी विचारधारा नेपालमा लागू गर्न खोज्दै छन् भन्नु बेतुकको कुरा हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । खोजविन र विश्लेषण गर्नुपर्ने कुरा त सत्तासीन नेकपासँग औपचारिक भाइचारा सम्बन्ध स्थापति गर्न किन चिनियाँहरू तयार भए भन्ने हो ।
चिनियाँहरूले सी विचारधारालाई नेकपामार्फत् नेपालमा प्रयोग गर्न खोजेको तर्क र शंका कुनै कोणबाट पनि यथार्थपरक देखिँदैन ।
नेकपाले राखेको प्रस्तावमा यो भाइचारा सम्बन्ध भएको होइन, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको पहलमा भएको हो । यस सम्बन्धमा आँकलन गर्दा विगतमा चिनियाँहरूले अवलम्बन गर्दै आएको नेपाल नीतिका सम्बन्धमा चर्चा गर्नु आवश्यक हुन्छ । २०४६ सालअघि अर्थात् पञ्चायती कालमा चिनियाँहरूको सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूपमा दरबारसँग थियो ।२०४६ सालको परिवर्तनपछि शक्तिकेन्द्रमा दरबारको स्थानमा दलहरू पुगे । त्यतिबेला जुन दलको सरकार छ, ऊसँग सम्बन्ध राख्ने तर पार्टीगत सम्बन्ध नराख्ने उनीहरूको नीति रहेको थियो । त्यतिबेला नेपाली राजनीतिमा बाह्य विशेषतः भारत र पश्चिमाहरूको चलखेल अत्यधिक बढ्दो र प्रायः पार्टीहरू यी दुई बाह्य शक्तिको खेलौना बनेको र चिनियाँहरूको नजरमा कुनै विश्वासिलो शक्ति नरहेकाले नेपाल–चीन सम्बन्ध त्यति हार्दिकतापूर्ण रहेन ।विश्व समुदायसँग प्रत्यक्ष रूपमा चीनलाई जोड्नको लागि ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ योजनालाई अघि सारेपछि भने चिनियाँ विदेश नीति नेपालमा मात्र होइन, अन्य देशमा पनि परिवर्तन भएको पाइन्छ । आफ्नो यो महत्वकांक्षी योजना पूरा गर्नका लागि चिनियाँले मित्र राष्टहरूबाट समर्थन, सहयोग र सहकार्य खोजिरहेको छ । चीनको यो योजनालाई रोक्न र निष्फल पार्न अमेरिकाले ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्रेटेजी’लाई अघि सारेको सर्वविदितै छ । यो स्ट्रेटेजीका आधारमा नेपाली भूमि प्रयोग गरी चीनलाई प्रहार गर्ने अमेरिकी दुष्प्रयासपछि भने चिनियाँ नेपाल नीतिमा परिवर्तन आएको छ ।‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्रेटेजी’मा ओली सरकारलाई फसाउन र अन्य दलहरूलाई प्रयोग गर्न अमेरिकीहरू सफल हुँदै गएपछि चिनियाँहरू चिन्तित हुँदै आएका छन् । नेपाली भूमि प्रयोग गरेर आफ्नो देशको सुरक्षामाथि नै धावा बोल्ने अमेरिकी चलखेल हुँदा चिनियाँहरू सक्रिय र आक्रामक हुनु अस्वाभाविक होइन ।नेपालसँग पार्टीगत र जनस्तरमा सम्बन्ध विस्तार गरेर मात्र अमेरिकीहरूको दुष्प्रयासलाई असफल पार्न सकिने मूल्यांकन चिनियाँहरूको भए झैं प्रतीत हुन्छ । कांग्रेसको हेडक्वार्टर नै पश्चिमाहरूको अखडा बन्दै गएको र पूर्व दरबारियाहरू पश्चिमाहरूकै आशामा आकर्षित भइरहेका अवस्थामा चिनियाँहरूले आफ्नो लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बाहेक अर्को भरपर्दो शक्ति नभएको मूल्यांकन गरे झैं प्रतीत हुन्छ ।हुन त, नेकपाभित्र पनि पश्चिमाहरूको चलखेल र प्रभाव कम छैन । ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्रेटेजी’मा नेपाललाई सहभागी गराउन यो पार्टीका प्रभावशाली नेता, कार्यकर्ताले निर्वाह गरेको भूमिकाले यही कुराको पुष्टि गर्दछ । तर यो पार्टीको आम पार्टी पङ्क्ति र समर्थकहरू साम्राज्यवाद विरोधी र चीनमैत्री रहेका छन् । यो पार्टीका पश्चिमाहरूका लागि काम गरिरहेकाहरू पनि खुल्ला रूपले चीन विरोधी गतिविधि गर्नसक्ने अवस्थामा छैनन् ।
यो सम्बन्धले नेकपाभित्र दिनप्रतिदिन बढ्दो पश्चिमा चलखेल मात्र नियन्त्रण हुने छैन, नेपालको राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गरी चीनलाई प्रहार गर्ने पश्चिमाहरूका दुष्प्रयासहरू पनि निस्तेज हुँदै जाने सम्भावना छ ।
यही स्थितिको आँकलन गरेर चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले नेकपासँग भाइचारको सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्रियता देखाएको हो । यो सम्बन्धले नेकपाभित्र दिनप्रतिदिन बढ्दो पश्चिमा चलखेल मात्र नियन्त्रण हुने छैन, नेपालको राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गरी चीनलाई प्रहार गर्ने पश्चिमाहरूका दुष्प्रयासहरू पनि निस्तेज हुँदै जाने सम्भावना छ । यस अर्थमा नेकपा र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी बीचको भाइचारा सम्बन्ध नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको लागि मात्र होइन, मुलुकको राष्ट्रियताको लागि उपलब्धिमूलक हुनेछ ।
(लेखकः वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल प्रेस काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ)
१२ आश्विन २०७६, आईतवार १२:२३
सत्तासीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका बीच भाइचारा सम्बन्ध स्थापित भएको छ । यी दुई पार्टीबीच भएको ६ बुँदे समझदारी अहिले राजनीतिक वृत्तमा विशेष चर्चाको विषय बनेको छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल आगमन हुने पूर्वसन्ध्यामा भएको यो भाइचारा सम्बन्धले मुलुकभित्रको मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतको पनि ध्यान केन्द्रित भएको छ ।
यो भाइचारा सम्बन्धको समझदारीले प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्र छलफलको विषय बनाइदिएको छ । आफ्नो मुख्य प्रतिस्पर्धी नेकपासँगको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको सहकार्यले आफ्नो राजनीतिमा प्रतिकूल असर पार्ने त होइन ? भन्ने चिन्ता नेपाली कांग्रेसमा प्रकट हुन थालेको छ । हल्ला नै सही, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङ्ग विचारधारालाई नेकपाले अबलम्बन गर्न लागेर हो भन्ने आँकलन केही नेपाली बुद्धिजीवी र राजनीतिक विश्लेषकले गर्न थालेका छन् ।
सत्तासीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीबीचको यो भाइचारा सम्बन्धले विशेषतः अमेरिकाको निदहराम भएका परिदृश्यहरू सतहमा देखिन थालेका छन् । यो समझदारी भएको लगत्तै अमेरिकी राजदूत याण्डी बेरीले राजनीतिक भेटघाटलाई तीव्रता दिएका छन् । राजदूतले यस विषयमा नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालदेखि प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवालाई भेटिसकेका छन् ।
नेपालका अन्य कम्युनिष्ट पार्टीका भाइचारा सम्बन्ध अन्य देशका कम्युनिष्ट पार्टीहरूसँग पनि रहँदै आएको छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीहरूको छिमेकी मुलुक भारतको कम्युनिष्ट पार्टीहरूसँग पनि भाइचाराको सम्बन्ध रहेको सर्वविदितै छ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँग पनि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीहरूको अनौपचारिक सम्बन्ध रहँदै आएको थियो । अहिले त्यस्तो सम्बन्धलाई नेकपा र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले औपचारिकता दिएका मात्र हुन् । यस अर्थमा यो सम्बन्धका विषयमा अनौठो मान्नु पर्ने र शंका उपशंका गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको संयुक्त आयोजनामा भएको चीनका राष्ट्रपतिको ‘सी जिन पिङ्ग विचारधारा’ छलफल अहिले विशेष चर्चाको विषय बनेको छ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले ‘सी जिन पिङ्ग विचारधारा’लाई नेपालमा लागू गर्न खोजेको र त्यसलाई अनुसरण मात्र होइन, कार्यान्वयन गर्न सत्तासीन नेकपा तयार रहेको एकथरी व्यक्तिहरूको मत छ ।
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो देशको परिस्थिति र राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसारको नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रम बनाउनुपर्ने कुरामा निरन्तर जोड दिँदै आएका छन् । अर्को देशको अन्धानुकरण गरेर सफल हुन नसकिने उनीहरूको अटल मान्यता रहँदै आएको छ । सी विचारधारालाई उनीहरू चिनियाँ विशेषता सहितको विचारधारा मान्दछन् । सी विचारधाराका विषयमा विश्वसमुदायलाई जानकारी दिन चिनियाँहरू चाहन्छन् । तर, यो विचारधारालाई अन्य देशमा लाद्न चाहँदैनन् । त्यसैले चिनियाँहरूले सी विचारधारालाई नेकपामार्फत् नेपालमा प्रयोग गर्न खोजेको तर्क र शंका कुनै कोणबाट पनि यथार्थपरक देखिँदैन ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीहरूले निरन्तर रूपमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँग भाइचारको सम्बन्ध गाँस्ने कोसिस गर्दै आएका छन् । औपचारिक सम्बन्धसम्म राख्ने अनौपचारिक सम्बन्ध नराख्ने नीतिलाई चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले अवलम्बन गर्दै आएको थियो । कुनै पनि देशको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्ने चिनियाँ विदेश नीतिका कारण उनीहरू औपचारिक सम्बन्ध राख्न पनि त्यति इच्छुक नहुने गरेको पाइन्छ ।
पञ्चायती कालमा मात्र होइन, २०४६ सालको परिवर्तनदेखि अहिलेसम्म सरकारस्तरीय सम्बन्ध राख्ने तर पार्टीहरूसँग औपचारिक सम्बन्ध नराख्ने विदेश नीतिलाई उनीहरूले निरन्तरता दिँदै आएका थिए । चिनियाँहरूले सी विचारधारा नेपालमा लागू गर्न खोज्दै छन् भन्नु बेतुकको कुरा हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । खोजविन र विश्लेषण गर्नुपर्ने कुरा त सत्तासीन नेकपासँग औपचारिक भाइचारा सम्बन्ध स्थापति गर्न किन चिनियाँहरू तयार भए भन्ने हो ।
नेकपाले राखेको प्रस्तावमा यो भाइचारा सम्बन्ध भएको होइन, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको पहलमा भएको हो । यस सम्बन्धमा आँकलन गर्दा विगतमा चिनियाँहरूले अवलम्बन गर्दै आएको नेपाल नीतिका सम्बन्धमा चर्चा गर्नु आवश्यक हुन्छ । २०४६ सालअघि अर्थात् पञ्चायती कालमा चिनियाँहरूको सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूपमा दरबारसँग थियो ।
२०४६ सालको परिवर्तनपछि शक्तिकेन्द्रमा दरबारको स्थानमा दलहरू पुगे । त्यतिबेला जुन दलको सरकार छ, ऊसँग सम्बन्ध राख्ने तर पार्टीगत सम्बन्ध नराख्ने उनीहरूको नीति रहेको थियो । त्यतिबेला नेपाली राजनीतिमा बाह्य विशेषतः भारत र पश्चिमाहरूको चलखेल अत्यधिक बढ्दो र प्रायः पार्टीहरू यी दुई बाह्य शक्तिको खेलौना बनेको र चिनियाँहरूको नजरमा कुनै विश्वासिलो शक्ति नरहेकाले नेपाल–चीन सम्बन्ध त्यति हार्दिकतापूर्ण रहेन ।
विश्व समुदायसँग प्रत्यक्ष रूपमा चीनलाई जोड्नको लागि ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ योजनालाई अघि सारेपछि भने चिनियाँ विदेश नीति नेपालमा मात्र होइन, अन्य देशमा पनि परिवर्तन भएको पाइन्छ । आफ्नो यो महत्वकांक्षी योजना पूरा गर्नका लागि चिनियाँले मित्र राष्टहरूबाट समर्थन, सहयोग र सहकार्य खोजिरहेको छ । चीनको यो योजनालाई रोक्न र निष्फल पार्न अमेरिकाले ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्रेटेजी’लाई अघि सारेको सर्वविदितै छ । यो स्ट्रेटेजीका आधारमा नेपाली भूमि प्रयोग गरी चीनलाई प्रहार गर्ने अमेरिकी दुष्प्रयासपछि भने चिनियाँ नेपाल नीतिमा परिवर्तन आएको छ ।
‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्रेटेजी’मा ओली सरकारलाई फसाउन र अन्य दलहरूलाई प्रयोग गर्न अमेरिकीहरू सफल हुँदै गएपछि चिनियाँहरू चिन्तित हुँदै आएका छन् । नेपाली भूमि प्रयोग गरेर आफ्नो देशको सुरक्षामाथि नै धावा बोल्ने अमेरिकी चलखेल हुँदा चिनियाँहरू सक्रिय र आक्रामक हुनु अस्वाभाविक होइन ।
नेपालसँग पार्टीगत र जनस्तरमा सम्बन्ध विस्तार गरेर मात्र अमेरिकीहरूको दुष्प्रयासलाई असफल पार्न सकिने मूल्यांकन चिनियाँहरूको भए झैं प्रतीत हुन्छ । कांग्रेसको हेडक्वार्टर नै पश्चिमाहरूको अखडा बन्दै गएको र पूर्व दरबारियाहरू पश्चिमाहरूकै आशामा आकर्षित भइरहेका अवस्थामा चिनियाँहरूले आफ्नो लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बाहेक अर्को भरपर्दो शक्ति नभएको मूल्यांकन गरे झैं प्रतीत हुन्छ ।
हुन त, नेकपाभित्र पनि पश्चिमाहरूको चलखेल र प्रभाव कम छैन । ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्रेटेजी’मा नेपाललाई सहभागी गराउन यो पार्टीका प्रभावशाली नेता, कार्यकर्ताले निर्वाह गरेको भूमिकाले यही कुराको पुष्टि गर्दछ । तर यो पार्टीको आम पार्टी पङ्क्ति र समर्थकहरू साम्राज्यवाद विरोधी र चीनमैत्री रहेका छन् । यो पार्टीका पश्चिमाहरूका लागि काम गरिरहेकाहरू पनि खुल्ला रूपले चीन विरोधी गतिविधि गर्नसक्ने अवस्थामा छैनन् ।
वोर्णबहादुर कार्की वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल प्रेस काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
nekapa, xi zing ping
Prevआज पनि घट्यो सुनचाँदीको भाउ
यात्रु बस दुर्घटना हुँदा ५ जना घाइते, हेलिकोप्टरमार्फत घाइतेको उद्धारNext